Sahaminta Tignoolajiyada Cusub si aad u Xaqiijiso Kor u qaadida Hanaanka
Dhawaan, ZhongrongTechnology iyo Machadka Dalian ee Fiisigiska Kiimikada ee Akadeemiyada Sayniska ee Shiinaha ayaa saxiixay heshiis iskaashi farsamo. Iyadoo in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah u leh warshadaha ethanol ee aan cuntada ahayn iyo warshadeeda hoose, tignoolajiyada Zhongrong waa agaasimaha fulinta ee Chi ...
Duqa Magaalada & Kooxda Hogaamisa waxay booqdeen Tignoolajiyada Tangshan Zhongrong Oktoobar,2021
Bishii Oktoobar , 2021, Tian Guoliang, Duqa magaalada Tangshan, Lang Wenchang, Ku-xigeenka Xoghayaha Kooxda Xisbiga iyo Ku-xigeenka Agaasimaha Horumarinta iyo Dib-u-habaynta Dawladda Hoose, Zhu Wenjun, Xoghayaha Guddiga Degmada ee Degmada Fengrun, Liang Xiaobo, ku xigeenka degmada Agaasime iyo qaar kale...
Soo saaraha ethanol
Zhongrong Technology Co., Ltd. Waa shirkad hormuud u ah warshadaynta, oo leh Xarunta Tignoolajiyada ee Gobolka Hebei iyo Tang...
Tech-Bio oo ka socota ZR Technology Gelida dukaamada waaweyn iyo kanaalada dawooyinka OTC
Tech-Bio oo ka socota ZR Technology Gelida Supermarket-yada waaweyn iyo OTC Pharmaceutical Channels -Ethyl Alcohol75%, isopropyl Alcohol, Ethyl Acetate Products Dhawaan, ZR Co., LTD ayaa si rasmi ah u gaadhay iskaashi istiraatiiji ah oo leh tiro badan oo silsilado dukaan ah sida ZR-Mart Supermaket, Carr...
TECHNOLOG ZHONGRONG EE 8aad ee Shiinaha(SHANGHAI) Bandhigga Tignoolajiyada Caalamiga ah ee 15-ka Abriil ilaa 17-ka Abriil
Shiinaha (Shanghai) Bandhiga Tiknoolajiyada Caalamiga ah waxaa iska kaashaday Wasaaradda Ganacsiga, Wasaaradda Sayniska iyo Tignoolajiyada, Maamulka Hantida Garaadka ee Gobolka iyo Dawladda Hoose ee Shanghai laga bilaabo Abriil 15 ilaa 17, 2021. Tech-Bio waa xirfadle sare- dhammayn jeermiska
Noofambar 11-keedii, 2020, Zhongrong Technology Corporation Ltd. iyo Alibaba waxay kala saxeexdeen heshiiska iskaashiga istiraatijiyadeed ee SKA.
Noofambar 11-keedii, 2020, Zhongrong Technology Corporation Ltd. iyo Alibaba waxay kala saxeexdeen heshiiska iskaashiga istiraatijiyadeed ee SKA. Waxay u taagan tahay xiriirka muddada-dheer ee ka dhexeeya warshadaha wax soo saarka sare leh iyo ganacsiga E-commerce ee dibedda, xaaladda guul-guuleysiga mustaqbalka. Tignoolajiyada Zhongtong ayaa horumarisa...
Hambalyo Tignoolajiyada Zhongrong ee lagu abaalmariyay magaca sharafta ee Ururka Sare ee Hebei (Abriil 29, 2019)
Subaxnimadii Abriil 29, kulan ammaan ah oo loo qabtay shaqaalaha moodeelka ah, shaqaalaha sare iyo ururrada horumarsan ee Gobolka Hebei ayaa lagu qabtay Guriga Martida ee Gobolka Taihang, caasimadda gobolka. Zhongrong Technology Co., Ltd. ayaa la guddoonsiiyay magaca sharafta "Heerka Sare"
Xoojinta maaraynta xiriirka maalgashadayaasha iyo ilaalinta xuquuqda iyo danaha maalgashadayaasha (Maajo 15, 2019)
Si loo ilaaliyo xuquuqda iyo danaha maalgashadayaasha, maamulka xidhiidhka maalgaliyayaasha waa in uu badiyaa qabtaa hawlaha muhiimka ah ee soo socda: Midda kowaad waa in ay qabato shaqo wanaagsan oo bixinta macluumaadka kana fogaato siidaynta xulashada. Xudunta shaqada IR waa siidaynta macluumaadka. Xogta ayaa shaaca ka qaaday...
Zhongrong Technology 2019 Kulanka bartamaha sanadka (Julaay 5, 2019)
Zhongrong Technology Co., Ltd. ayaa ku qabtay magaalada Qian'an shir albaabadu u xiran yihiin oo ay isugu yimaadeen madaxda dhexe iyo kuwa sare. Guddoomiye Dai Shumei oo hogaaminayey 35 maamule dhexe iyo sare ayaa ka warbixiyey hawshii qeybtii hore ee sanadkan,isagoona si faah faahsan u dejiyey qorshayaal ku wajahan qeybta labaad ee sanadkan,wuxuuna cadeeyey in ay...